Qaabka iyo tirada beel ahaan loo qeybsaday Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qaabka iyo tirada beel ahaan loo qeybsaday Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya (AKHRISO)
Xubnaha ka mid noqon doonna Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya ayaa haatan maraaya meel gabo-gabo ah, iyadoona qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay kaalin mug leh ku yeesheen ka mid noqoshada xubnahaas.
Inkastoo beelaha Soomaaliyeed oo dhan aysan meesha ka muuqan ayaa hadane waxaa la dhihi karaa waxaa kuraasta ugu badan Aqalka Sare qaatay beesha Daarood, halka qaar ka mid ah beelaha kalena ay heleen kuraas aad u tiro yar.
Waxaa weli dhiman dhisida xubnaha ka mid ah noqonaya maamulada Hirshabeele iyo Somaliland, inkastoo xubnaha loo qoondeeyay Somaliland uu weli muran ka taagan yahay.
Maamulka Hirshabeele oo maanta gudbiyay liiska musharixiinta xubnaha Aqalka Sare u tartami lahaa ayaa laga rabaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku doortaan 8-xubnood ee Aqalka Sare uga matali doonta baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Sidoo kale, 11 xubnood ee loo qoondeeyay maamulka Somaliland ayaa waxaa weli ka taagan dood ku aadan qaabka loosoo magacaabi lahaa, waxaana maalmaha soo socdo laga yaabaa in dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga doorashada dadban ay go’aan deg deg ah kasoo saaraan sidii laga yeeli lahaa.
Odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Somaliland ayaa weli dood ka qaba tiradda 11 xubnood ah ee la siiyay, iyagoona weli ka careysan 2 xubnood oo laga siiyay beelaha Daarood gaar ahaan kuwa kasoo jeeda deegaanada maamulka Puntland.
Hoos ka aqriso shaxda lagu kala qeybsaday xubnaha cusub ee Aqalka Sare
Xubnaha loo qoondeeyay Somaliland oo ah 11 xubnood waxaa la isku haayaa in beelaha yar-yar ee Daarood laga siiyo xubno, taasoo ay diidan yihiin odayaasha & siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland.